संविधानसभा नछोडे प्रचण्ड अझै धसिनुहुन्छ : सीपी गजुरेल « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
संविधानसभा नछोडे प्रचण्ड अझै धसिनुहुन्छ : सीपी गजुरेल
४ चैत्र २०७१, बुधबार २२:३२ मा प्रकाशित
० तपाईंको पार्टीले अन्ततः प्रचण्डसँग मिल्नुको विकल्प भेटेन होइन ?
– प्रचण्डसँग मिल्ने–नमिल्ने विषय प्रमुख होइन, मुख्य कुरा त अहिले मुलुकमा जुन खालको समस्या र सङ्कट पैदा भएको छ, यसको निकासका लागि आफ्नो भूमिकालाई मुखरित तुल्याउने हाम्रो पार्टीको ध्येय हो ।
० प्रचण्डहरूले संविधानसभा नछोडेसम्म माओवादीसँग वार्ता नै हुँदैन, पार्टी–एकता त टाढाको कुरा भनी कसम खाने तपाईं नै होइन र ?
– हाम्रो यो भनाइ त अहिले पनि कायम नै छ । गर्नुपर्ने नै त्यही हो । तर, अहिले जुन खालको एकताको माहोल बन्दै छ, यसको बेग्लै राजनीतिक कारण छ । अहिलेको परिस्थितिको माग नै यस्तै छ भनेर बुझ्नुस् ।
० प्रचण्डको पछि नलागी तपाईंहरूले केही गर्नै सक्नुभएन भनी बुझ्दा कसो होला नि ?
– यस्तो बुझाइ सही होइन । हामी अग्रगामी संविधान बनाएर देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने उद्देश्यले शान्तिप्रक्रियामा आएका थियौँ । तर, संविधान पनि नबन्ने र शान्तिप्रक्रिया पनि करिब–करिब समाप्त हुने अवस्थाले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हुँदा–हुँदा युद्धकालीन मुद्दासमेत उल्ट्याएर हामीमाथि कारबाहीको वर्षा गराउन खोजिँदै छ । यस्तोमा माओवादी कम्युनिस्ट शक्तिबीचको एकता यसकारण अपरिहार्य बन्न पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
० प्रचण्डले त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि काङ्ग्रेस र एमाले शक्तिशाली रहेछन् भन्ने प्रतिक्रिया दिए नि, किन होला ?
– प्रचण्डजीका निष्कर्षहरूको कुरै नगरौँ । उहाँले यस्तै निष्कर्ष निकाल्दा–निकाल्दा माओवादी आन्दोलनलाई यो विजोगको अवस्थामा पु-याइसक्नुभयो । त्यसैले उहाँको निष्कर्ष उहाँकै पोल्टामा रहन दिउँm ।
० तपाईंहरू अब प्रचण्डकै नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर जाने त होला नि, होइन र ?
– प्रचण्डजीको नेतृत्वमा त अब पार्टी एकता हुनै सक्दैन । उहाँको नीति र नेतृत्व पूरै असफल सावित भइसकेकाले नेतृत्वको विषय अब नयाँ ढङ्गले उठ्छ । इतिहासले अवसर दिए पनि प्रचण्डले आफूलाई सफल नेता सावित गर्न सक्नुभएन । त्यसैले अब कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा छलफल गर्दै जाँदा तय होला । जसको नीति सही छ उसैले नेतृत्व गर्छ । गलत सावित भइसकेको नेता वा नीति लागू गर्न त पार्टी एकता गरिन्न नि !
० सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको तपाईंहरू विरोध गरिरहनुभएको छ, तर प्रचण्डले त त्यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ नि ?
– हो, यस्तै कुरामा स्वीकार र सहमति जनाउँदै गएकाले नै उहाँ आफू पनि फस्दै जानुभयो र अरूलाई पनि फसाउने चेष्टा गर्नुभयो । मुलुकमा आज प्रतिक्रान्तिको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, प्रतिक्रान्तिलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा पुग्नुभएको छ उहाँ यतिबेला । युद्धकालका मामला उल्ट्याएर सबै माओवादीमाथि मुद्दा लाग्ने अवस्था जो निम्त्याउन लागिएको छ, यसमा प्रचण्डजीकै गलत नीति र नेतृत्वले काम गरेको छ । हाम्रो पार्टीले जुन नीति लिएको छ यो सही र सत्य सावित भएको छ ।
० प्रचण्डजी त यही संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ, यस्तोमा कसरी पार्टी एकता होला ?
– उहाँ यही संविधानसभामा टाँसिइरहन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । जहिलेसम्म उहाँ यसमा टाँसिइरहनुहुन्छ, उहाँ रसातलमा पुग्ने उपक्रम पनि त्यत्तिकै तीव्र बन्ने हाम्रो ठहर छ । प्रचण्डजीको पार्टीले सही समयमा सही निर्णय लिन सक्छ भने जनताको नजरमा आफूलाई माथि उकास्छ, नभए सिद्धिन्छ । हामीले त भनिआएकै छौँ कि यो संविधानसभाले जनताको संविधान दिनै सक्दैन, संविधानसभाको निर्वाचन निरर्थक थियो । उहाँहरूलाई अझै पनि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि यो संविधानसभा छोडेर बाहिर आउनुस् । अब आउनुहुन्न भने त उहाँहरू आफ्नो नियति भोग्नुहुन्छ, हामी हाम्रै बाटोमा लम्किरहन्छौँ । तत्काल राजनीतिक विषयमा कसरी मिलेर जाने भन्नेमा हामी छलफल गर्न र कार्यगत एकता गर्न चाहिरहेका छौँ, एमाओवादीसँग पार्टी–एकताकै कुरा त निकै टाढा छ ।
० विप्लवहरूसँग चाहिँ एकताको प्रयास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन नि तपाईंहरू ?
– तपाईं अहिले नै ठूलो नेता बन्न धेरै रहर नगर्नुस् भनी हामीले भन्दाभन्दै बिचरा नेत्रविक्रम चन्द पार्टी छोडेर त जानुभयो, तर खै उहाँको पार्टी भन्ने त कतै अस्तित्वमै आएको देखेका छैनौँ हामीले । तर, सबै माओवादीहरू एकताबद्ध भएर अघि नबढे खतरनाक अवस्था सामुन्ने नै आइसक्यो भन्ने चेत राख्नु सम्बद्ध सबैको निम्ति अपरिहार्य छ ।